Wararka Xanta Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Yurub Wararka Ay Ka Qoreen, Ozil, Pogba, Eriksen, Rudiger, Ramsey, Camavinga, Umtiti, Hulk
HomeHoryaalka FranceWararka Xanta Suuqa kala iibsiga iyo Wargeysyada Yurub Wararka ay ka Qoreen, Ozil, Pogba, Eriksen, Rudiger, Ramsey, Camavinga, Umtiti, Hulk
December 9, 2020 Horyaalka France, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Kooxda MLS DC United ayaa hogaaminaya tartanka loogu jiro saxiixa Arsenal ee ciyaaryahanka khadka dhexe ee Jarmalka Mesut Ozil, 32. (DHA – in Turkish)
Manchester United ayaa laga yaabaa inay u dirto ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer France Paul Pogba kooxdiisii ​​hore ee Juventus isla markaana ay ku hesho weeraryahanka reer Argentina Paulo Dybala, oo 27 jir ah, oo ay isku dhaafsadaan. (The Athletic)
Pogba, oo 27 jir ah, ayaa doonaya inuu dhimo mushaharkiisa oo ah 290 kun ginni isbuucii si uu ugu laabto kooxda heysata horyaalnimada Talyaaniga, halkaasi uu kasoo tagay 2016. (Calciomercato via Daily Mirror)
Tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane ayaa weli ku riyoonaya inuu la soo wareego ciyaaryahanka ku guuleystay Koobka Adduunka ee Faransiiska, laakiin madaxda Bernabeu ayaan dooneyn fikradda. (Marca)
West Ham ayaa fiirineysa suurtagalnimada ay dib ugu soo celin karto London ciyaaryahankeedii hore ee khadka dhexe Christian Eriksen, oo 28 jir ah, iyadoo la halgameysa inay saameyn ku yeelato Inter Milan. (Eurosport)
Barcelona ayaa xiiseyneysa saxiixa daafaca dhexe ee kooxda Chelsea iyo xulka Jarmalka Antonio Rudiger. (ESPN, via Sport)
Juventus iyo AC Milan ayaa sidoo kale laga yaabaa inay u tartamaan saxiixa 27 jirka Rudiger. (Calciomercato – in italiana)
Kooxda Juventus ayaa iska iibin karta xiddiga khadka dhexe ee xulka qaranka Wales ee Aaron Ramsey xagaaga dambe kadib markii uu 29 jirku ku fashilmay in uu wax saameyn ah ku yeesho kooxaha waaweyn ee Serie A tan iyo markii uu ka soo dhaqaaqay kooxda Arsenal sanadkii 2019. (Mail)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee France Eduardo Camavinga ayaa u sheegay Rennes inuu doonayo inuu baxo xagaaga soo aadan. 18 jirkaan ayaa xiiseynaya Manchester United . (Mundo Deportivo via Sun)
Newcastle United ayaa rajo wanaagsan ka leh inay kulankooda Premier League la ciyaaraan West Brom Sabtida ka dib markii dib loo furay garoonkoodii tababarka ka dib markii uu ka dillaacay cudurka coronavirus. (Daily Mail)
Dib ugu soo laabashada Samuel Umtiti ee kooxda Barcelona kadib dhaawacii waa talaabo kale oo kooxd uga tagayo bisha Janaayo, iyadoo Everton iyo Juventus ay labaduba xiiseynayaan daafaca reer France, 27. (Sport – in Spanish)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Atalanta Marten de Roon, oo 29 jir ah, ayaa sheegay inuusan ka fekereynin inuu u dhaqaaqo Barcelona. (Football Italia)
Weeraryahanka reer Brazil Hulk, oo 34 jir ah, ayaa si bilaash ah ugu biiri kara koox ka dhisan Premier League bisha Janaayo ka dib markii uu soo gabagabeeyay afar sano oo uu ku qaatay Shiinaha kooxda Shanghai SIPG . (The Sun)
Weeraryahanka reer Talyaani ee Everton Moise Kean, oo 20 jir ah, ayaa albaabka u furay inuu si joogto ah ugu dhaqaaqo Paris St-Germain ka dib markii uu si fiican ugu soo bilaabay amaahdiisa kooxda heysata horyaalka Faransiiska. (Goal)
Leeds United ayaa sii waday inay kormeerto Marcus Edwards, oo 22 jir ah, ka dib markii ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee reer England uu ka tagay Tottenham kuna biiray kooxda reer Portugal ee Vitoria Guimaraes sannadka 2019. (Football Insider)
Daafaca Manchester City Pedro Porro, oo 21 jir ah, ayay u badan tahay inuu heshiis amaah ah ugu dhaqaaqo kooxda reer Portugal ee Sporting Lisbon si rasmi ah xagaaga dambe, iyadoo daafaca reer Spain uusan waligiis u ciyaarin kooxda Pep Guardiola. (Manchester Evening News)
Dhowr kooxood oo Premier League ah ayaa xiiseynaya ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Spain Mikel Vesga, oo 27 jir ah, kaasoo qandaraaskiisa kooxda Athletic Bilbao uu dhacayo xagaaga soo aadan. (AS -in Spanish
Kooxda heerka labaad ee Bristol City ayaa ka mid ah kooxo badan oo qorsheynaya inay la soo wareegaan daafaca bidix ee reer England George Cox, 22, kaasoo si joogta ah uga soo dhaqaaqay Brighton kuna biiray kooxda reer Holland ee Fortuna Sittard xagaagii hore. (Football Insider)